I-LegitVPN.com - qhathanisa abahlinzeki abahamba phambili be-VPN
I-VPN ehamba phambili
Ama-VPN aphezulu ku-Netflix
Ama-VPN ahamba phambili eChina
Ama-VPN ahamba phambili we-Chrome
Ama-VPN ahamba phambili eTorrent
Ama-VPN ahamba phambili
Uyemukelwa kuLegitVPN.com - silapha ukukuqondisa ukuthi ukhethe i-VPN ehamba phambili ngezidingo zakho.
Sibuyekeza kuphela abahlinzeki be-VPN abaphephile nabasheshayo ukusebenzisa okufakazele ukwethembeka kwabo.
Qhathanisa abahlinzeki be-Best VPN
Abahlinzeki be-VPN abahamba phambili nabasebenza ngokusemthethweni ngonyaka ka-2020
Funda konke ukubuyekezwa
Isivivinyo sezinsuku ezi-30 samahhala
Iyahambisana neNetflix, BBC & Disney + Hulu
Ngaphezu kwamazwe angama-55
Vakashela isiza seNordVPN
Ngaphezu kwamazwe angama-90
Vakashela isayithi le-ExpressVPN
Eshibhe i-VPN laphaya
Vakashela isayithi leSurfshark VPN
Isivivinyo sezinsuku ezi-45 samahhala
Vakashela isayithi leCyberGhostVPN
Isivivinyo sezinsuku ezi-31 samahhala
Ngaphezulu kwamaseva we-2000
Vakashela isayithi le-PureVPN
Vimbela imikhawulo ye-Geo kalula ngama-VPN ahambisana nokusakaza. Sisetha i-athikili elula ukukuqondisa.
I-Chrome yisiphequluli esisetshenziswa kakhulu emhlabeni. Kubaluleke kakhulu ukuvikela ukuphepha kwakho kwe-cyber nokungaziwa kwakho ngamathuluzi we-VPN.
Wonke umsebenzisi we-intanethi kumele aqaphele ama-Torrents nama-softwares peer-to-peer. Siphakamisa ukusebenzisa i-VPN ngemfihlo.
I-China iqinile kakhulu ngezinqubomgomo kulokho okuza ekusetshenzisweni kwewebhu emhlabeni jikelele. Kubavakashi kungacasula ngempela.
I-VPN eyaziwa nangokuthi inethiwekhi ebonakalayo yangasese yinto okungenzeka ukuthi uzwile ngayo. I-VPN yisoftware evikela ukuxhumana phakathi komamukeli nomthumeli. Kwenza ithrafikhi yakho yomphakathi ingaziwa. Abantu abaningi bayisebenzisela ubumfihlo obengeziwe nokungaziwa kodwa kaningi isetshenziselwa ukudlula ama-geoblocks okungenzeka ukuthi asethwe ngabaphathi.
Futhi izinsizakalo eziningi zokusakaza zishicilela ama-movie amasha nochungechunge e-USA ngokwesibonelo ngaphambi kokuthi ziphele ezweni lakho.
Nge-VPN ungafinyelela okuqukethwe okuphakelwe yi-USA, ngoba i-webserver icabanga ukuthi use-US.
Yini okufanele ngiyenze lapho ngikhetha i-vpn-service efanele?
Kunamakhulu ama-VPN laphaya kepha siqhathanisa lawo aphezulu kuphela. Abaningi babo banikeza izithembiso ezingamanga abangasoze baziletha, sisekela kuphela ama-VPN abekhona isikhathi eside futhi aziwa kakhulu embonini yezokuphepha. Ku-2017 ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi kunabantu abaningi abasebenzisa kabi ama-VPN wamahhala asuselwa ku-Android ukuthola ukufinyelela okungavinjelwe ohlelweni lwezisulu.
Awekho ama-vpns asemthethweni, izilingo zamahhala kuphela futhi angatholakala phezulu kuleli khasi.
Ungazi kanjani ukuthi i-VPN legit?
Awudingi ukukhathazeka ngalokho. Sivele sivivinye ukuxhumana okuphephe kakhulu kwe-VPN okuphethwe yizinkampani zangempela ezethembekile emhlabeni jikelele.
Ingabe isivinini senethiwekhi se-VPN sihamba kancane?
Kwezinye izimo lokhu kungaba yiqiniso. Sivivinye amakhulu abahlinzeki be-VPN abahlukahlukene ukubona ukuthi yini engaletha ukusebenza okuhle ngaphandle kokulahlekelwa izakhiwo ezibalulekile. Siwavivinyile nasemidlalweni futhi sifufula ukubona ukuthi ngabe kuyikho ngempela abakushoyo.
Ingabe i-VPN internet surfing iphephile?
Impela. Uma usebenzisa i-VPN awaziwa ngokuphelele futhi uvikelekile. Akekho owaziyo ukuthi wenzani, ungubani nokuthi ukuphi.
Ingabe i-VPN isusa ama-virus nama-troijans?
Ngokudabukisayo cha. Ama-VPNs avame ukubonwa njenge-antivirus kepha cha. Bavikela kuphela ukuxhumana kwakho kuwebhu ebanzi yomhlaba. Azikwazi ukukuvikela kumafayela owalanda noma emakhasini owavakashelayo.
Ngabe ngidinga ukuvala i-VPN uma ngingayisebenzisi?
Cha akudingeki. Abantu abaningi bakugcina njalo ukukhulisa ubumfihlo. Uma kukhulunywa ngezingcingo namadivayisi eselula kungadla ibhethri.
Ungayisebenzisa kanjani insiza ye-VPN?
Ukusebenzisa i-VPN kulula futhi kuyashesha, kuqala ngezinyathelo ezilula.
Thola i-VPN efanelekayo ngezidingo zakho. Sikusiza ngale ngxenye ukuze ungasebenzisi ucwaningo oluthatha isikhathi uwedwa, njengoba bese sibahlolile bonke abahlinzeki be-VPN.
Lapho usuthengile i-VPN ubufuna ukuthola imininingwane yakho. Ngalezi ziqinisekiso ngena ngemvume kuwebhusayithi yakho yabahlinzeki be-VPN bese ufaka uhlelo lokusebenza kumadivayisi owafunayo. Kungaba ilaptop, iselula noma ideskithophu. Ungakuthola kuzo zonke.
Manje usuyifakile isoftware sekuyisikhathi sokuyethula bese uxhuma endaweni oyithandayo.
Isebenza kanjani i-VPN?
Bona ukuthi kulula kanjani ukufaka nokusebenzisa. Ingxenye ekhohlisayo kuphela ethola i-VPN efaneleke kakhulu ecaleni lakho.
Izindaba ze-cybersecurity nezimagqabhagqabha
Ukuba sengozini kweCisco & Firepower 23.7.2020
Noma ngubani osebenzisa iCisco neFirepower kufanele bavuselele abashayeli babo ngokushesha. Kutholwe ukuba sengozini okubucayi.
Siyiqembu labantu asebenomkhakha wokuphepha kwe-cyber amashumi eminyaka. Sinesifiso sokuvikela ubumfihlo be-inthanethi nedatha yomuntu siqu. Yilokho yilowo nalowo kithi okufanele aqhubeke nokungena ngaphakathi. Ama-VPN ayindlela engcono futhi elula yokuzivikela ngobugebengu be-cyber ngokushesha. Siyazi ukuthi kungaba nabahlinzeki be-VPN abahluke kakhulu abanye babo kuphela ngezinhloso ezingekho emthethweni. Kungakho silapha ukukuqondisa ukuthola i-VPN ephephe kakhulu futhi ephephile.
Ama-VPN enzelwe ini?
I-VPN (inethiwekhi yangasese yangasese) umsebenzi oyinhloko ukugcina amazinga akho okuphepha e-inthanethi ephezulu alungisa ukuxhumeka kwakho futhi afihle i-IP-adress yakho kubaduni abangaba khona.
I-VPN nayo ingasetshenziselwa ukufinyelela kokuqukethwe kwe-geoblocked njengokubuka amanye amazwe imifudlana neziteshi ze-tv.
Ungalanda futhi idatha kusuka ku-inthanethi ngenkathi ugcina ukuxhumana kwakho okungaziwa nokuphephile
Ukuphepha kwe-inthanethi kuyinto okufanele sonke siyinakekele. Amacala obugebengu be-cyber abelokhu ekhula njalo futhi ukuhlaselwa okuningi kuya ngokuya kufika usuku ngalunye.
Ukuhlaselwa okujwayelekile kakhulu yi-Ddos (ukwenqatshwa kwensizakalo okungaphazamiseki) okwephula ukuxhumana kwakho noma ukwephula idatha yakudala lapho idatha yakho yangasese ingavuza ezandleni ezimbi.
Ukuze uqiniseke ukuthi uphephile kufanele usebenzise abahlinzeki be-VPN abaphephile, abasheshayo nabaphephile.
Siyiqembu labantu abanentshisekelo yokuvikela ubumfihlo bethu nabanye abantu. Indlela enhle yokwenza lokho ukuthola i-VPN efanele. Ngokuhlola nokuqhathanisa abahlinzeki abahlukile be-VPN singasiza abathengi benze izinqumo ezingcono.
Ukubuyekezwa kweCyberGhost VPN
Ama-VPN ahamba phambili we
Ukuba sengozini kweCisco Asa neFirepower
I-2020 LegitVPN.com - ama-VPN amahle kakhulu